Nepniews, ozi ọma, ndị enyi, flags ụgha, mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị; ihe bụ eziokwu na ihe na-abụghị eziokwu? : Martin Vrijland
Nepniews, ozi ọma, ndị enyi, flags ụgha, mgbasa ozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị; ihe bụ eziokwu na ihe na-abụghị eziokwu?
gbara akwụkwọ NEPNEWS, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 December 2016	• 63 Comments
Anyị ahụwo oké ụjọ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ebe nrụọrụ weebụ a na-ekwukarị mgbe ụfọdụ ma mgbe ụfọdụ, na-ekwu na ihe adịghị mma. Ụfọdụ nyochaa dugara na nkwubi okwu ahụ bụ na ụjọ na-atụle ndị ọzọ na e nwere 'ọkọlọtọ ụgha'. Nke a apụtaghị na mwakpo ọ bụla bụ onye na-atụ egwu. Mgbe ụfọdụ ị na-enweghị ike igosi ya ma ọ bụ na e nwere ihe ngosi nke na-enye echiche na ihe aghaghị ịbụ eziokwu. O bughi ka o bu n'obi ikpocha ihe obula nke neme dika 'odi', ma obu ihe bara uru ime 'echiche di nkpa' n'ihi na omume egosiwo na ndi ochichi nwere ike agha ugha ma duhie iji mezuo ihe ufodu. . Ọ bụghị n'efu ka anyị nwere ahịa Machiavelli na Netherlands. A na - akpọ aha a mgbe Niccolo Machiavelli, onye edemede na onye ọkà ihe ọmụma ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke chere na ndị ọchịchị nwere ike iji 'omume na-ezighị ezi' pụtara iru ihe mgbaru ọsọ ha. Onye ọ bụla nke nwetụrụ nsogbu ahụ iji leruo anya na mwakpo kpọmkwem ama achọpụtala na mgbe ọtụtụ ihe anaghị emepụta. Mwakpo nke 11 September 2001 (911) bụ ma eleghị anya ihe atụ kachasị atụ maka nke a. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe doro anya, dị ka na nso nso a na igbu ọchụ nke onye nnọchianya Russia na Turkey. Nke ahụ nwere ike dị nnọọ ka ọ bụ n'ezie ọgụ. Otu ihe a na-emetụta ọgụ na ahịa Krismas na Berlin. Ihe njirimara siri ike maka agha aghaghi adi mgbe nile, mana, dika ima ima atu, ihe di iche iche mara ama na onye na-ewepu akwukwo ya. Ọ bụghị oge mbụ nke a mere. The isi ajụjụ, Otú ọ dị, karịsịa ma ọ bụrụ na o nwere na ọchịchị ndị ghọgburu site haziri ọgụ (hoaxes) ma ọ bụ ọgụ na-ata ụta na onye iro (ụgha ọkọlọtọ) na ihe nzube ha chọrọ iji nweta karịa na ya .
Na February nke afọ a, OVV, ụlọ ọrụ nyocha nke MH17 ụgbọelu ọdachi, natara Ego Machiavelli. Nke a dị nnọọ ịrịba ama na ọdachi ikuku ahụ emewokwa ka e nwee ọtụtụ ajụjụ. N'ihi na ọdachi dị otú a, dị ka 911, ọtụtụ ndị na-ada ada, ọ na - abụkarị 'emeghị' iji jụọ ya ajụjụ. Nke a dị egwu nye ndị niile e gburu egbu na onye ikwu ya. Nnukwu nlebara anya na-echebara mmetụta na iru újú na nnukwu ọrụ ncheta dị ukwuu na-eme ka onye ọ bụla nwere nsogbu nwatakịrị nwere ọdachi dị otú ahụ ga-enwe obi amamikpe ozugbo; ọ bụghị na mgbasaozi mgbasa ozi, ọ bụ n'ihi nrụgide mmekọrịta nke gburugburu ebe obibi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị elee anya ọdachi dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịjụ ma ọ bụrụ na enyo ọ bụla nwere ike ịbụ onye ezi omume. MH17 bụ mmalite nke mmụọ mgbagwoju anya nke Russia na ebe ọ bụ na e tinyewo agha ndị agha America na Europe na nkwekọrịta zuru oke na Russia. Mgbe 911 gasịrị, George Bush malitere 'agha na ụjọ,' mgbe nke a gasịrị, ọbụbụeze ụwa adịghị eguzo. The na-akpa ọchị bụ na "agha na oké ụjọ" ama ada itie megide Al nakwa Prisila nwunye, ìgwè tọrọ ntọala site na America na ya na-alụ ọgụ ndị Russia na Afghanistan, ma na Osama biini Laden gaara chigharia imegide ndi US. A afọ ole na ole gasịrị, anyị na-ahụ US ego dị nnọọ otu ìgwè ọzọ na ogwe aka Colonel Gaddafi idebe na Libya na anyị na-ahụ ọzọ na-akwado maka otu ìgwè na a ọhụrụ guise na Syria. Ya mere, ọ dịkarịa ala, ihe niile ụfọdụ ndị na-eyi ọha egwu na-eme bụ ihe na-aga n'ihu nakwa na ndị agha dị iche iche bụ 'onye iro' n'otu oge ịlụ ọgụ maka Western n'oge ọzọ. Nke ahụ nwere ike ọ dịkarịa ala na-edugakwa na ụfọdụ ajụjụ dị oké mkpa? Otú ọ dị, nsogbu ahụ bụ na 'echiche dị oke egwu' enwetala ụdị nsogbu ahụ nke na ọ fọrọ nke nta ka a katọọ gị ma ọ bụrụ na ịnwa ime ya. "Mee ka ihe mgbasaozi na-agwa gị na ihe obodo chọrọ ka i kwere ma ọ bụ na ị bụ onye na-eche echiche ọjọọ". Omume ahụ kwesịrị ịdọ anyị aka na nti. Ntak emi afo ekpenyeneke ndikere ke idem? N'ihi na mgbasa ozi naanị nwere ndị ọkachamara n'ụlọ ma anyị ụmụ amaala dị mfe enweghị ihe ọmụma na ike ime nke ahụ? Ma obu n'ihi na anyi kwesiri iche na gọọmentị na-eme ihe kachasị mma maka anyị ma ghara inwe agbakọ abụọ? Ị nwere echiche, mgbe afọ ndị a nile nke ahụmahụ ndụ, na gọọmenti na-eme nke ọma maka gị maọbụ ka ha yiri inye echiche na nke a bụ ikpe (karịsịa n'oge oge ntuli aka)?
Kemgbe oge na-adịghị anya, a na-eji iwu 'Ordo ab Chao' mee ihe, ma ọ bụ okike 'Order si Chaos'. Na nke a, anyị na-ahụkarị atụmatụ nzọụkwụ site na nhazi 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta"soro. Ọ bụrụ na ịmepụta nsogbu kachasị mkpa, dị ka ihe gbasara 911 ma ọ bụ ọdachi ndị ọzọ na-eyi ọha egwu, mmeghachi omume bụ 1 nke ụjọ na nchegbu. Mgbe ahụ, ndị mmadụ na-akpọku maka ngwọta (ngwọta) na kedu ka ị si ere agha ka mma karịa mgbe ndị mmadụ na-akpọ maka ya? Ndị United States amụtala na site na Vietnam Agha. Ị pụghị ịlụ ọgụ ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwado nke ndị mmadụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ụjọ ejiri ndị mmadụ ma ọ bụ iru uju ma ịsị na ị ga-eri nri ndị ahụ dị egwu, mgbe ahụ, ọ ga-eme gị obi ụtọ! Ozi nke ebe nrụọrụ weebụ dị ka nke a bụ na gị, n'adịghị ka ihe obodo chọrọ, ga-enwe ike ịtụgharị uche ọzọ. Nke a na-amalite site n'echiche dị oke egwu na ozi ọma ahụ ma nwee ike ime ka ịtụgharị uche dị iche iche na ụdị 'mmemme' ndị ọzọ nke na-ekpebi echiche gị banyere ụwa na ndụ n'ozuzu ya. Ọ bụrụ na amụrụ gị na United States, ọ nwere ike ịbụ na ị bụ Onye Kraịst. Ọ bụrụ na a mụrụ gị na Saudi Arabia, ị nwere ike ịghọ onye Alakụba. N'okwu abụọ ahụ, ị ​​nwere ike ikwenye n'ezie na "eziokwu ahụ". Ihe isiokwu ndị dị na weebụsaịtị a na-eche na ị ga - akpali gị ka ị gaa n'ihu ma chọpụta otú omenala ma ọ bụ gburugburu ebe obibi ị ga - esi kpebisie ike inwe nkwenkwe siri ike ma ọ bụ gburugburu ebe ị mụrụ ma zụlite. Ọ bụrụ na anyị kọwapụta ya dị ka 'mmemme', ihe atọ bụ ịgafe usoro ihe omume ahụ ma hụ ihe nghọta ụwa na-enweghị na mmemme ahụ. N'otu oge ahụ, enwere ike ịghọta na mmemme a nwere ike gbaa oge niile site na bọmbụ nke mgbasa ozi, egwu, ihe nkiri, akwụkwọ na ụdị ihe ndị ọzọ niile na-akọwa njirimara anyị nke ụwa a. Nyochaa na saịtị a anaghị adị mgbe nile ma ọ bụ dabara na oyiyi gị; ihe kachasị mkpa bụ na ị nọgidere na-akpali ịhụ ma ọ bụrụ na emetụta echiche gị. Ọ bụrụ na a na-achịkwa ma ọ bụ na-emetụta echiche gị nke ụwa, gịnị gbasara ntụgharị nke onye ị nọ n'ime obi dị elu?
Ị nwere ike ịjụ onwe gị ihe isi ya bụ ịkpọte (dị ka ọ bụ) n'ihi na ị nwere ike ịghọ aghụghọ na mgbasa ozi na njikwa nghọta banyere ọdịdị nke eziokwu gị. Gịnị mere ị ga-eji chọọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-agha ụgha? Ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ n'okpuru uwe mwụda nke ahụ dịkwa mma? Obi tọrọ m ụtọ! N'ikpeazụ, anyị niile chọrọ ịka nká dị ka o kwere dị ka o kwere mee, na ọtụtụ oge obi ụtọ dị ka o kwere mee. Ọ ga-amasị m inye gị oyiyi nke ụlọ akwụkwọ nke azụ na-egwu n'ime ọnyà. Naanị mgbe olu nke ọnyà ahụ dị mkpụmkpụ ma ọ dịghị ụzọ ọ bụla, ọ na-achọpụta na ha ejidewo onye mkpọrọ. Isiokwu dị na saịtị a na-agbalị igosi gị na e nwere otu map okporo ụzọ a na-etinye ebe ebumnuche nke mmadụ dị na mkpọrọ, ma ebe ọ na-ahụghị na ụgbụ ahụ mechie. Ego ole ka a ga - ewere tupu ndi mmadu amalite inwere neti ma mara na ha apugh igwu mmiri? Otú ọ dị, isi ihe ahụ bụ na ọ na-eme nzọụkwụ site na nkwụsị, nke mere na ọ pụtaghị. Police ala jikoro ẹkenam nzọụkwụ site nzọụkwụ, na-kagburu ego, nanotechnology na keakamere ọgụgụ isi na ẹkenam n'ime ndụ anyị na anyị na-esiwanye kewapụrụ n'ime akara unit nke ọchịchị. Nke a na-eme obere n'ihi na a na-anwa anyị ngwaọrụ dịka smartphones na akụkụ dị ka ngwọta nzaghachi na a nsogbu (dịka ịchọta ma na-ele ihe niile anyị na-ekwurịta maka na ọ na-echebe anyị pụọ n'ụjọ). Ka ọ dịgodị, ndị mmadụ na-anọgide na-atọ ụtọ na ihe ochie Roman ókè: 'achịcha na play'. Enweghị 'steak na play', ma 'achịcha na egwu'. Ndị mmadụ agaghị enwe ya nke ọma ma na-enwe nrụgide ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ nwere ike iri. Ka ọ dị ugbu a ị na-enye ha ihe ndọpụ uche na ihe ngosi egwuregwu ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ a na-anwa ịdọ gị aka ná ntị banyere akara mmechi. Otu nkwupụta a ma ama nke Johan Cruijff kwuru bụ: "Ị ga-ahụ ya mgbe ị ghọtara ya."Mgbe ị ghọtara ya, ị na-ahụkwa mkpa ya. Enwere akara weebụ nke na-eme ka okpukpe na ohu ohu dị ọcha. A na-ezite mmadụ na ụlọ mkpọrọ dijitalụ ebe ntanye aka na ịntanetị bụ obere ntakịrị site na kaadị akwụmụgwọ ugbu a. Transhumanism ga-arụ ọrụ dị mkpa na nke a. Iwu na ụkpụrụ niile anyị na-ahụ ugbu a dị ka ndị e guzobe n'ụwa nile bụ ọnụ ụzọ maka ụlọ mkpọrọ dijitalụ a na-emeghe nke onye ọ bụla ga-eme n'oge na-adịghị anya a na-etinye na ntanetị ma enweghị ike ịzụta ma ọ bụ ree ma ọ bụrụ na ịkwadoghị iwu nke superstate.
Ọchịchị ugbu a na-etinye aka n'ụzọ dị ukwuu n'ịwakpo obi dị oké njọ. Ndị na-eche echiche na-abaghị uru bụ ihe kachasị egwu na atụmatụ. Ịntanetị ga-abụrịrị ohere na-adọrọ adọrọ nke na-eme ka onye ọ bụla na-eri Facebook na Google, wee dọta mmasị ndị ahụ. Anyị abialarịrị na ngbochi ebe nnwere onwe echiche adịghịzi mma. Nnwere onwe nke echiche echiche ga - adị n'okpuru nduzi mgbasa ozi dị iche iche na 'ozi ntancha'. E kwuwerị, ọ ghaghị ibu ụzọ bụrụ 'nsogbu'na mgbe ahụ, a ga-ekpuchi nsogbu ahụ, dịka ọmụmaatụ, Brexit ma ọ bụ mmeri nke Donald Trump. Ọ bụrụ na ị mgbe ahụ ida mgbe ndị dị otú ahụ mmeri, na mgbe ahụ anyị nwere ike ikwubi na aku na uba na mmetụta nke 'adịgboroja ọma' na ya mmetụta na ịtụ vootu-eme omume ahụ n'ụzọ mere ka ọ daa aku ọnụ. Mgbe ahụ ị nwere nnukwu 'nsogbu'na mmeghachi omume ga-edozi. Ndị na-atụ ụjọ na nsogbu akụ na ụba na-akpọ maka enyemaka site n'elu. Nke ahụ ga - eduga n'ịchọpụta ihe ọjọọ na ịntanetị, n'ihi na ị chọghị ka ndị mmadụ mee nhọrọ n'ọdịnihu ka ha mechaa kwaa ụta. Na nkenke; ihe kachasị 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta'ga-arụ ọrụ ya ebe a. Anyị nwere ike Ya mere, nsi na nnwere onwe ikwu okwu na Internet ugbu a na-enye ga-eduga mmeri nke nri populists "na na n'okpuru ọchịchị nke" nri nku populists 'aku na uba 2017 / 2018 a hefty optater ga-enweta. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ikwu na 'nnwere onwe ikwu okwu' site na intaneti na 'ozi ọma' mechara mee ọgba aghara ya mere i nwere ike igbochi nke a n'enweghi nguzogide. Anyị na-ahụworị njikere maka nke a. Na mgbe anyị nọ nke Ogologo ụwa malitere ịtụ egwu. Ya mere ọ dị mkpa ka ị mara na ị ga-anọgide na-eche echiche nke onwe gị. Anyị achọghị ka ụmụ anyị kwụsị n'ụwa ebe George Orwell chere na ndị uweojii bụ eziokwu ma na nkà na ụzụ dị ugbu a na gọọmentị na-elegharị anya na isi anyị. Ọ bụ na ọ dị ntakịrị ka ọ na-ewebata ma ọ bụ na-ekwubiga okwu ókè? Ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị dị oké njọ banyere ọnọdụ nkà na ụzụ (lee ihe nkiri dị n'okpuru ebe a).
N'ihi na ọ dị mkpa ka ndị mmadụ nọgide na-akpali akpali iche echiche dị nkpa, ka anyị wee bụrụ ndị nwere onwe anyị n'otu ọhụụ nke ndụ na ibi ndụ dabeere na mkpali sitere n'aka mkpụrụ obi anyị; n'ihi na ọ dị mkpa ka anyị ghara ịghọ cyborg ndị e bu ụzọ mee nke a na-etinye aka na ụkpụrụ na ụkpụrụ nke steeti ma tụba ya n'ụlọ ọrụ ịgba ohu dijitalụ; ya mere ọ dị mkpa na ebe nrụọrụ weebụ dị ka nke a ka dị adị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na weebụsaịtị a nwekwara ike ịga n'ihu na 2017. N'oge a nkwado gị karịrị karịa mgbe ọ dị mkpa. Dị ka ị maara, m na-ebi ndụ site n'onyinye sitere n'aka gị dịka onye na-agụ ihe. Ọ bụ ya mere m ga-achọ ịjụ gị ka ị bụrụ onye òtù ugbu a ma ọ bụ ka ị nye onyinye. Pịa ebe a maka onye otu ịghọ na ebe a maka otu onyinye. Daalụ n'ọdịnihu!
5G internet n'ozuzu Netherlands a onyinye ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ nke gị onwe gị?
Ihe mere ụwa ji gbanwee ghọọ ụlọ mkpọrọ na-emeghe n'ime afọ ole na ole
Tags: ime nnyocha, ozi ọma, ụgha ọkọlọtọ, agba, hoax, hoaxes, internet, ozi ọma, ụgha ọkọlọtọ
Ihe na-egbochi ndị na-emepụta pasita Brainwashing dere, sị:
28 December 2016 na 19: 47
Na isiokwu banyere Bert Koenders na srebrenica / Aleppo equation na-eme
Harry Baljet dị na ndị ọzọ na Facebook a ederede ziri ezi, ya bụ, na-akpọ ndị na-eyi ọha egwu ndị nnupụisi ugbu a.
Nke ahụ na-eme ka ndị na-ahụ maka njikwa ihe ọmụma na-emewanyewanye.
Ndien ntak-a? Ka ịgbanwuo ihe mgbe emesịrị. Mgbe ahụ, ndị na-akpọ mgbasa ozi jụrụ (site na VanDale ahọrọ aha na ndepụta 'okwu nke afọ 2016') na-enupụ isi na mberede. Ya mere, a na-akpọ ndị na-eyi ọha egwu ndị nnupụisi na mgbe ahụ, ndị mgbasa ozi jụrụ ajụ ga-akpọ ndị nnupụisi, mgbe ahụ, a ga-akpọ ndị nnupụisi a n'Ịntanet dị ka ndị dị ize ndụ nke na-asọpụrụ iyi ọha egwu. A na-atụgharị ya na mbara igwe ruo oge ụfọdụ.
Mgbe ọzọ ịdọ aka ná ntị ọzọ: Ná mmeghachi omume dị n'okpuru nke Harry, Lindsay Brandevoort rụgharịrị. Ọ bụ maka enyemaka a rịọrọ ka e jidere onye a na-akpọ njide obodo. Nke a bụ n'ezie ihe na-adịghị mma nke melitere itoolu.
Ninefornews na-agbasa dịka ebe mmegide a na-achịkwa na-enwe ọtụtụ nkwarụ.
Ihe ndị ahụ e kwuru na mbụ bụ ndị 100% ikuku igwe.
29 December 2016 na 06: 03
Ihe bụ eziokwu na ihe na-abụghị eziokwu.
"Otú ahụ ka Amri si banye 'cheese cheese' '
nsogbu, mmeghachi omume, ihe ngwọta na-agbakọta ọnụ ọzọ.
Na-egosi na Amri bu ụgbọ ala na Sloterdijk ma eleghị anya anyị agwaghị 'ọkachamara egwu' n'ihi na bla bla bla bla bla bla.
29 December 2016 na 06: 10
N'ụzọ dị mwute, ebe anaghị aga. Ka anyị lee anya na msn, "Anis sụgharịrị na cheese"
Averroes dere, sị:
29 December 2016 na 07: 32
Ọ dị mfe ihe na-eme, a na-eji ihe niile eme ihe n'ịgbasa ụwa n'ime ógbè dị n'okpuru ọchịchị Kọmunist
Usoro 2030 Agụmakwụkwọ Mega - 'Mee America Great Again'
Ihe eji eme ka okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị otú ahụ, bụ akụkụ nke atụmatụ ụwa niile maka New World Order. Otu n'ime ihu nke usoro ihe omume ha bụ nwoke a na-akpọ Parag Khanna, onye a ma ama 'ụwa niile' a na-anụtụbeghị. Parag, bụ onye isi na-eme nchọpụta na Mahadum nke Asia na Ijikọ ụwa ọnụ na Lee Kuan Yew School of Public Policy na National University of Singapore. Parag bụkwa onye na-enye ndụmọdụ na usoro ntinye aka nke usoro mgbasa ozi nke US National Intelligence Council, na-eje ozi na Barack Obama maka mgbasa ozi nke ndị isi.
Parag Khanna edekwara ọtụtụ akwụkwọ, ha gụnyere:
Igwe ihe ike na America: Ibu nke Ama-State (2017).
Ụwa nke Abụọ: Empires na Influence na New Global Order (2008),
Otu esi agba ọsọ ụwa: ịtọcha akwụkwọ na ntinye nlọghachi ọzọ (2011)
Njikọ njikọ: Ịkọwa ọdịnihu nke Global Civilization (2016)
O doro anya na ebumnobi nke ụwa ọhụrụ, na uche niile metụtara njikọ, na ọdịdị ala. Ihe omuma ihe n'azu okwu a, nke bu nchikota nke ihe jikotara ya na ihe omumu ya, di otutu dika usoro nke Sustainable Development, na ihe mgbaru ọsọ nke United Nations maka ijikota uwa na Megacities.
29 December 2016 na 07: 36
Egwuregwu Nzuzo: Agụụ Ọkụ, chọpụta ọdịiche
29 December 2016 na 08: 00
Enwere mgbịrịgba nke na-agụ ụda kacha mma, na-egosi SCN
Mayor Aboutaleb ka UN na New York
Ụbọchị ịdepụta: 01-06-2016 14: 00
Mayent Ahmed Aboutaleb akpọwo ndị United Nations òkù ka ha soro na nzukọ New York na 3 June gbasara ime ihe ike na mmetụta ya na-eto eto. Na obula bu otu anyi nwere ike isi mee ka ndi na-eto eto kwusi ike megide echiche nke echiche ndi mmadu. N'ime otu mkparịta ụka ndị a, Mayor Aboutaleb ga-akọwa Rotterdam.
29 December 2016 na 10: 19
Daalụ @Averroes maka Ama a. Ọ na-eti m ugboro ugboro na ihe ọ bụla e mere atụmatụ na edere ya maka 100% na akwụkwọ 'ukara'. Dịka ọmụmaatụ, gụọ Treaty nke EU: ihe niile, ma ihe niile 'ha' na-eguzo na chọrọ iji nweta bụ n'ime ya. Akwukwo akwukwo nke SCN bu ihe ekwesiri ighota nke oma - nihi ihe ndi nadigh anya nke ndi madu guru ya dika ihe di iche ...... ma ọ bụrụ na ha agụ ya!
29 December 2016 na 10: 46
Ezi ihe nkiri si otu onye na-eme ihe: https://www.youtube.com/watch?v=3MKeeI60fhQ
29 December 2016 na 10: 34
Ọ na-aga n'ihu:
Democratic Socialists nke America (aha yiri OrGG nke INGSOC)
Òtù ahụ akwadoro ndị na-aga ime ntuli aka, dịka Walter Mondale, Jesse Jackson, Ralph Nader (na nzuzo), John Kerry, Bernie Sanders, na Barack Obama.
Ọ bụghị ihe ndabara na ndị mmadụ dị ka Orwell, Huxley nọ na-agbaso ụbọchị, FABIAN SOCIETY!
George Bernard Shaw (Fabian Society) na-ekweta na ime mgbaasị bụ ihe mgbaru ọsọ nke socialism.
29 December 2016 na 10: 47
Lee! Ee, m hụkwara ya. Ọ na-ekwu ya.
29 December 2016 na 10: 52
@Diewer, ọ dịghị mkpa usoro a! Ha nile na - eduga n'otu nchịkọta ndị ahụ, ụdị nke mgbagwoju anya, socialism, ndị Katọlik wdg.
Ịga n'ihu na-eme atụmatụ nke Òtù North America Union, na ịhapụ United States na-eweta ọnọdụ dị ịtụnanya. N'okpuru Iwu Martial, ma ọ bụ n'oge ọgba aghara obodo, map ọhụrụ na-apụta; nke ahụ bụ mpaghara map FEMA. Nke na-ekpughe ọdịdị dị ịtụnanya nke map ụwa asaa.
Echiche a abụghị ihe ọhụrụ, na North American Union na-eme ugbu a. N'ezie, dị ka Forbes si kwuo, ọ ga-eme nke ukwuu n'afọ iri na-abịanụ; nke malitere na 2013. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ nke United Nations agenda maka 2030.
29 December 2016 na 10: 55
Ọchịchị, a na-ahụ ihe dị anya:
29 December 2016 na 11: 04
Ị na-enwu site na ihe ị gbara gburugburu. Saul Alinsky gbara ume maka ndi mmadu dika Obama, Sanders, Hillary Clinton wdg.
29 December 2016 na 11: 22
"Ụlọnga Presbyterian zụlitere narị puku dollar ole na ole na-ezube ka a kpọọ Alinsky's Industrial Areas Foundation iji bịa ịhazi ndị ogbenye"
"N'ọsọọsọ nke ndị isi ugbu a, otu onye ghọtara na Alinksy nwere nghọta. Ụda Donald gosiri na ọ bu n'obi ịmalite ime ihe mgbe ọ gasịrị. Ya ebubo na ebubo na ebubo na enweghi ihe obula, obughi ibu, obughi ihe obula. Naanị nzube ha bụ ịkpasu mmeghachi omume - site n'aka Hillary Clinton, site n'aka ndị na-akwado nkụda mmụọ nke onye iro ya. "
29 December 2016 na 19: 02
Obodo egwuregwu Satudarah na-eto 10.000 euro site na ọlaedo na-ekwu banyere ịwakpo bọmbụ. Amaara m na ha maara n'ezie na ọ bụghị Hells ndị Mmụọ ozi. Ha aghọtaghị ihe ọ bụla gbasara onye na-agbaso mwakpo ndị a mgbe nile.
Ana m eme ya. Isis ????
30 December 2016 na 08: 45
Ezigbo onye maara na m na-arụ ọrụ Gladio.
Ihe ọzọ, onye isi oche nke ndị mmụọ ozi bụ Daniël Uneputti.
Enwere m ntakịrị nrutuaka na ị bụ onye na-enwetala ebe ọ bụ banyere 2006.
Na spin-wrapped spin about Your's curriculum vitae, dị ka m, nwere ike ịgụ na Daniël Uneputty Wikipedia.
Ee, otu ụlọ oriri nke ndị mmụọ ozi hells na-abụ NCF (Dutch Cocaine Factory), mechara bụrụ NCF-Holding, ma bụrụ akụkụ nke AKZO-Nobel. Nke mbụ, a na-eme cocaine, emesia amphetamine. Ụlọ ọrụ gbanwere aha ya Ma ọ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ka m na-amaghị, na ndị mmụọ ozi mmụọ ozi mere Amsterdam amphetamine ma rere m mara na ojiji.
30 December 2016 na 08: 58
gbaghara maka njehie ederede.
adje dere, sị:
30 December 2016 na 02: 06
Otu n'ime akara ngosi mgbe ị na-ahụ na ihe na-apụta na aka Saturn, ma ọ bụ na m na-akpọ ya satan: gbanwee ihe niile, ihu ala, site na azụ gaa n'ihu nakwa otú ahụ. A na-ebo ndị mgbasa ozi ndị ọzọ ebubo na ha na-eweta ozi ọhụụ mgbe MSM na-eweta ozi ọma ahụ. Dị ka ihe atụ ebe Newsweek:
A na-akpọ ndị Nationalist na populists ebe a dị ka ndị na-eme onwe ha. Ihe a na-eme na-aghọwanye nke ọma na ndị mmadụ na-akpalite ibe ha. Ọ bụ n'ezie ụwaism na ọbịbịa na-abịa. A na-akpọ Populists na ozi ndị ọzọ na ọkụ 1 ma na-agba ọchịchịrị.
30 December 2016 na 09: 34
Banyere ụda na-ekwenyeghị banyere CO2 hoax na okpomoku zuru ụwa ọnụ.
Mgbe m maara CO2 hoax, enwere m nkọwa ahụ ma ọ bụrụ na m bụ onye na-akwado ụda olu. Nke ahụ ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe mwute.
Ndị nna ukwu na-agbazi na-akụziri ndị mmadụ ụda.
Onye obula nwere ike ichetara m ezigbo akwukwo gbasara ihu igwe.
Enwere m akwụkwọ ọgụgụ dị mma site na Tim Ball, mana ma eleghị anya, onye nwere ọnụahịa kachasị elu.
Eziokwu dere, sị:
30 December 2016 na 11: 01
Ụnyaahụ mụ na ndị mụrụ m na-anọdụ ala na-eri nri mgbe nkịta anyị chọrọ ịbanye, ana m etinye onwe m aka ma meghere ụzọ maka nkịta anyị na n'oge ahụ nna m kwuru na ọ na-eche oyi, nne m zara ya na ọ dị ọkụ ụwa.
N'oge ahụ, m gwara ha na akụkọ ahụ bụ banyere okpomọkụ na ụwa na CO2 na hoax nakwa na ụwa enweelarị oge oyi na oyi. Na mberede, nna m were iwe ma kwuo na olu dara ụda na sieves (dicks) ha egosighi na telivishọn ruo ogologo oge na oghere ndị ahụ na-agbaze, a na-egbukwa ụmụ ahụhụ pola n'iyi.
Mgbe ahụ amalitere m ịchị ọchị n'enweghị ihe ọ bụla ma jụọ ya ma ọ bụrụ na ị hụla onwe gị na ndụ n'ezie site na anya gị ma ọ bụ na ị nyochala nke a? Ọ na-ewesa m iwe ọzọ wee kwuo na ha gosipụtara ya na TV na akụkọ.
N'ụzọ dị mma, m ka nwere enyi m hụrụ ya na mama m ntakịrị.
Nna m bụ ihe furu efu, ma ọ bụrụ na minit TV 5 adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na enwere mgbarụ ọ na-agba gburugburu.
30 December 2016 na 17: 17
??? ma ọ bụ mwute.
Mkparịta ụka nkịtị na-agaghịzi ekwe omume na ndị dị otú ahụ.
Ọ bụ nnukwu alaka ụlọ.
Ọ dị ka ịgwa ndị na-eto eto okwu.
Ike na ya.
Camera dere, sị:
30 December 2016 na 17: 38
Ihe ndị a bụ ụzọ mbụ nke ikpe ahụ, ụbụrụ gị nke na-achọghị ka gị na gị nwee mkparịta ụka maka na ha ga-adaba na nkwonkwo obi, anyị niile maara ya.
N'ihe dị ka okpomoku zuru ụwa ọnụ, "mega ụgha (mgbe ọ bụla" maka ntutu isi na ijikọ ụwa ọnụ, wdg. Ị nwere ike igosi nke a nke na-abụ ED nke udo udo ruo ọtụtụ afọ, mgbe Greenpeace na-ekwu na ọ bụ eziokwu dị ka isi, Ihe ọzọ bụ eziokwu, anyị ga-adịkwa ka Martin n'ime isiokwu ya, mmetụta uche nke isiokwu ahụ mgbe ọ bụ naanị ụgha maka ihe ọzọ agbata (ntutu na geoengineering)
Lee n'okpuru ED nke Greenpeace mba na usoro mmetụta uche ya, nye ndị mụrụ gị naanị
1 January 2017 na 11: 18
Ọ bụghị otu kuki ma echere m na nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye ìhè:
Ibe akwukwo: https://www.friendsofscience.org/index.php?id=1
30 December 2016 na 10: 02
31 December 2016 na 11: 56
taa na msn.com: "Sneaky 6 afọ na-eji akara akara nke nne na-ehi ụra ịzụ ahịa"
Ọ bụghị naanị na nwatakịrị ahụ na-asọ oyi kama ọ bụ nwatakịrị nke m na-eche ọzọ. Maka na o mekwara ugwo. Ezi ọrụ maka 6 afọ.
31 December 2016 na 20: 20
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị edide akwụkwọ ga-agbanwe mgbe niile, otu ihe kpatara ya.
1 January 2017 na 07: 15
Onye obula choro 2017 obi oma, nke aru na nke uche.
1 January 2017 na 16: 22
Ekele dịrị gị nakwa na onye ọ bụla na-aga n'ihu ịhapụ okwu efu na 2017 ma ghara ikwe ka a kwụsị ya n'okpuru nrụgide ndị ọgbọ.
Dị ka Martin Vrijland si kwuo, nke a bụ ezigbo nchịkọta nchịkọta n'ime ihe na-erughị otu awa, ekele.
N'ụlọ akwụkwọ praịmarị, ụmụaka na-enweta nghọta akụkọ, n'ụzọ nkịtị, nne na nna na-agụ akwụkwọ akụkọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị anyị nwere isiokwu gbasara ọmụmụ ihe ọmụmụ ebe ha ga-agbaso Akụkọ. Ya mere, na ụlọ akwụkwọ, eziokwu (myths) na akwụkwọ 1 na-adọta na mgbakọ na mwepụ na asụsụ ma wụsara ya na ngaji ahụ.
Ka anyị nwee olileanya na ndị nkuzi / nna-ukwu / ndị nkụzi na ndị nne na nna na-ajụ ajụjụ ndị ọzọ na 2017 gbasara nsogbu ndị a ma ghara ịjụ ma hà ewepụla ụmụ ha n'oche. Ị pụghị ibili n'isi ụtụtụ, ogologo oge ahụ na-echere ka ị na-enwe obi eziokwu nye nwatakịrị ahụ ka ị na-enwekwu dissonance n'ọdịnihu ...
1 January 2017 na 09: 58
Ozi ọma maka ndị ọrụ France (lelee ya na msn.com)
"Onye ọrụ France nwere ike ịgbanwe ekwentị n'èzí oge ọrụ". Nke a bụ onye Minista na-arụ ọrụ na France, M. El Khomri kwuru.
Ihe ndị a pụrụ ịdabere n'ebe a gosipụtara na ọ bụ eziokwu na dịka onye ọrụ, ị ghaghị ịnweta onye ọrụ gị ruo mgbe ụnyaahụ.
1 January 2017 na 10: 10
na mgbe ụfọdụ ozi ọma na msn.com.
lee "nwata nwoke 13 gbara na Rotterdam"
Mgbe anyị pịa na anyị na-ahụ ihe osise nke ụgbọala ndị uweojii abụọ na ederede "A na-enyo ndị mmadụ anya na ha na-emebiga ihe ókè" ????
Enweghị ihe ọ bụla dị njọ na ya. Ha na-eme ihe na RTL News.
Ana m eche na ndị RTL na-emepụta mmanya ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ n'oge awa ọrụ.
2 January 2017 na 20: 08
General Erik Akerboom chọrọ iwepụ ihe ọkụ ọkụ dị arọ.
Ntughari uzo a nwalere 'nsogbu-response-solution' (Latin: Ordo ab Chao) amalitela ịmị mkpụrụ mgbe mgbanwe mgbanwe kwa afọ. "Ọ gaghị abụ ụzọ ọzọ !! "
N'agbanyeghi na enwere nlekota igwe onyonyo igwe onu ogugu n 'oge nke afo na Netherlands, anyi huru obere ogbaaghara na ime ihe ike megide ndi oru nyere aka.
Site na mgbasa ozi na-akọ banyere ọtụtụ ihe egwu dị egwu na mberede, ana m achọpụta na a ga-amachibido ịgba égbè na-esote n'afọ ọzọ. Nchedo karịa ihe niile. Ọ dị m mkpa na onye ọrụ ugbo na-enweta mmiri ara ehi na-ekpuchi ihu? Onye oru Nchebe nwere ike ime.
A ga-ekwekwa ka ngwa ọkụ ọkụ ndị ahịa na-ekwe ka afọ 1 dị.
Eleghi anya n'afọ ọzọ nnukwu ọdachi na-eji ọkụ ọkụ ma ọ bụ yiri.
Ọ bụghị na enwere m nzuzu banyere ihe ọkụ ọkụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, enwebeghị m ọkụ ọkụ mgbe m bụ nwata na ime ihe ike megide ndị na-elekọta mmadụ ka m na-ekwu okwu ọma. Ma, m na-echekwa nke ọma, m na-ekwu, ma bụrụ nke e mebere ma ọ bụ gbarie. N'ihi na ebee ka ihe oyiyi ahụ dị?
Ana m egosiputa "mmeghachi nsogbu-nsogbu-Diocletian" ma na-achọ ịkọ ya ma ọ bụrụ na ndị mmadụ amaghị ya.
2 January 2017 na 21: 51
Ihe a na-apụghị ikweta.
Otu enyi chere na ọ dị njọ ma zitere m ozi e-mail ... ma kọwaara m nkenke na m hụkwara ihe ọzọ, ha ha, ya mere ị na-ahụ ma ugbu a, m na-ahụ ihe a site na PORVH n'elu, ekele m
Mepụta nsogbu >>>>> Ime ọkụ na mmebi
Gosi mmeghachi omume >>>>> nke ụmụ (na-eto eto) ndị mmadụ, ndị na-ama ụlọikwuu ma ọ bụ na nke ọzọ, ihe dị mma, ihe nkwụsị, anyị ga-eme ihe banyere ya ...
Kedu ebe ikwuputa okwu ahụ na-enye ihe ngwọta> aka ndị ọrụ enyemaka na-eme ka ihe niile dịrị (ihe ọ bụla?
ha na ndị uweojii na - edetu ha ezé (ala)
ndị uweojii na-akwado ọchịchị njikere
(anyị na-atụ anya na anyị agaghị etinye aka ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ahapụ onwe anyị ifriizi ma nwee ike ile 100 afọ :-)
PS: Adịghị m ime ihe gbasara ọkụ ọkụ, ma ọ bụ na-elezi anya dịka mt Trucks na ahịa cherry, lezie anya
2 January 2017 na 20: 32
taa kwa na msn.com; "Gịnị mere Kelly Bundy?"
Ọfọn. ị pịa isiokwu ahụ dịka onye na-awụ akpata oyi n'ahụ.
M na-eche na ọ kụrụ meth ma ọ bụ ihe ma ọ bụ mere ihe facelift.
O. ee ma anyị na Russia na agha m na-agụ. Mana nke ahụ bụ e jiri ya tụnyere ihe mere Kelly Bundy.
M wee gụọ (nakwa na msn.com) na ndị ọrụ nyere onye ọrụ ahụ merụrụ ahụ aka adịghị atụgharị ya na nkume na ọkụ ọkụ. Ndị uweojii na-emegide akụkọ mbụ ha na-echegbu onwe ha mgbe a napụtara ha. O doro anya na nwa amaala nwere ihe ngosi vidiyo na ọ na-agha ụgha, n'ihi gịnị kpatara i ji megide ozi gị gara aga? Ọmarịcha ha niile.
2 January 2017 na 22: 33
Ọbụna akụkọ ndị ọzọ adịgboroja, nakwa na msn.com:
"Egwu na-atụ ụjọ na Netherlands nwere n'uche"
Akwukwo ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu ghara ime ihe ojoo.
Agnes Jonckheere dere, sị:
3 January 2017 na 11: 20
Martin, ị nwere ike ịkọwa ya ma dọọ gị aka ná ntị.
Ụfọdụ okwu. Agaghị m ekwu banyere ihe ziri ezi, n'ihi na ọbụna ndị a na-akpọ ndị na-azụ aka na-ekere òkè na usoro ndị isi obodo.
Banyere usoro nkwenye. Ọ bụ eziokwu na ebe a mụrụ gị, okpukpe kachasị. Ka ọ dị ugbu a, n'ihi nchịkọta, enwere ike ịchọta ma họrọ okpukpe ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịkwụsị usoro na arụmụka, ọ bụ eziokwu na Illuminati abanyewokwa n'okpukpe, karịsịa na mpaghara ndị dị elu.
Mana ot'odi ka onye isi ala Mauritz choro iwetu ezi nke Baibul adighi nma. Echere m na ị kwesịghị ịhapụ nwa ahụ mmiri mmiri. Enweghi ike inweta akwukwo ihe omuma n'ebe ahu, nani gnosticism, na site na ndu ndi gara aga ... nke di oke egwu na uche m.
Tupu anyị ekwupụta mkpesa anyị, a ghaghị ịma ihe ọmụma dị mma iji mebie ya.
Enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ ihe banyere Illuminati. Ma ọ bụ ndị na-achị ụwa dum.
3 January 2017 na 14: 12
@Agnes, Illuminati bụ onye nkịtị n'ozuzu. Ndi otu na-achịkwa ụwa ochie ka ha wee tụnyere 'Ndị ịnyịnya anọ nke Apocalypse' bụ 6 nke akwụkwọ Mkpughe site n'Agba Ọhụụ? Otu dị iche iche dịka ndị Zionist, Jesuit, Freemasons dị elu na ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ha na-ekwenyere na mgbe ha na-emekọ ihe iji chọpụta dialectic a maara nke ọma. Site na esemokwu (nsogbu-mmeghachi omume-ngwọta) a na-enye ihe ngwọta mgbe ahụ ma ya mere, a na-etinyere ike ọzọ. Echere m na nke a bụ nkọwa ziri ezi nke ihe na-eme, ọbụlagodi na m na-ekwu otú ahụ n'onwe m.
3 January 2017 na 17: 50
Agnes, ị na - ekwu 'na ọ bụ eziokwu na illuminati abanyekwala n'okpukpe'
Enwere m ike ịgwa gị na ọ bụghị eziokwu.
Maka ndị ọzọ, achọtara m mmeghachi omume gị nke ọma.
Kedu ihe ị na-eche site, dịka ọmụmaatụ, 'Ị nweghị ike ịchọta ihe ọ bụla ederede akụkọ, naanị gnosticism, ọbụna site n'oge gara aga' .... Ọ dị m nwute ma enweghị m ike ịmepụta chocolate na nke ahụ.
Ihe m na-aghọta bụ na ị bụ Onye Kraịst Christian Democrat. Site na nkwanye ùgwù zuru oke, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na dissonance akpọrọ uche ga-abụ nsogbu ịghọta ihe na-eme.
Amaghị m otu esi enyere gị aka. Ndi ochichi onye ochichi !! OMG, okwu ochichi onye kwuo uche gaa ezie ntutu m na-eguzo na ọgwụgwụ. Na okwu 'Christian' maka ya .... Ị ga-aghọta na anyị na-na-otú ike site Zionist Christian Democratic popet Jan Peter Balkenende na Netherlands kpachie anyị afọ mgbe e mesịrị nwere nsogbu na-eje ije ... ..but ọtụtụ ndị na-amụ anya ugbu a ma mara na Kraịst Democracy ebe ị kwụ n'ihi na, nnukwu ugha. Nyochaa ozugbo Archive ebe a na Beyond Okwu Trix. M olileanya na unu ga-adịghị anya idap nrọ ị na-ebi. Ike.
3 January 2017 na 18: 22
Agnes, ahụla m okwu gị, ana m aghọtakwa ihe ị na-enweghị nchegbu na ọgba aghara.
Aga m etinye okwu gị ebe a.
3 January 2017 na 18: 25
ezighi ezi, echere m na nchegbu gị.
3 January 2017 na 18: 28
3 January 2017 na 18: 37
7 January 2017 na 06: 22
Agnes, ị nwere ike ịhụ nke a na-adọrọ mmasị.
10 January 2017 na 10: 48
Agnes nwere ike iche na ọ dị elu karịa anyị, n'ihi ya, ọ naghị anabata ịghọgbu nke ìgwè ndị na-ekweghị ekwe. Ma ọ bụ onye nzuzu na-agbanye n'ọgba aghara. Ọ bụrụ na ọ maliteghị ịkụ ndị mmadụ aka na anyụike!
3 January 2017 na 13: 22
N'ihi na ọ dịghị ihe dị ebe a banyere Istanbull (ehi :-) omume hụrụ ebe a ka bụ ezigbo nkọwa na youtubefilm n'okpuru.
N'ụzọ dị ịrịba ama, ndị dara na-ejegharị n'ime Santa uwe na mgbe bụghị na teligraf bụ ọbụna a nkiri nke a nkịta na-echebe akara tapers (nkịta ndị na-emekarị-atụ ụjọ ezimezi oku)
7 January 2017 na 11: 29
Camera, nke a yiri m nke ọma. Ònye nyere iwu ka MIT? Sean Hross nwere ike ịbụ anụ ọhịa wolf na-eyiri atụrụ. Àjà nye chi Saturn
7 January 2017 na 13: 37
Ee, e nwere ọnwụ, otu ihe ahụ metụtara ndị nnọchiteanya Russia! Ọrụ nzuzo dị ka CIA na MoSSad bụ maka ọrụ a, ọnọdụ miri emi na-arụ ọrụ ... nlebara anya nke MrCati. Akwadoro:
4 January 2017 na 18: 32
Ụjọ ụjọ na Amsterdam.
Taa na msn.com: 'Ihe omimi nke metro na-akpata egwu'
'Maka oge nke abụọ na 48 awa, okporo ụzọ okporo ụzọ na Amsterdam dị larịị.
Ndị njem na D66 onye otu aka Bart Vink chọrọ ịza "
Enwere m echiche na Bart na aha anụmanụ maara kpọmkwem ihe eji egwu egwu.
* Nkọwa nke ụjọ: nzube nke ịtụ egwu ndị mmadụ ma ọ bụ akụkụ nke ndị bi na mba.
4 January 2017 na 18: 48
Ọ na-adọrọ mmasị na ị na-akpọ ya na-akpata ụjọ, n'ihi na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ bụ mgbe ị na-amụ akụkọ ihe mere eme nke okwu iyi ọha egwu na ọchịchị:
Site Latinised Greek gubernatio "management, ọchịchị", si Ancient Greek κυβερνισμός, κυβέρνησις (kybernismos, kybernesis) "n'iru, pilotage, na-edu" si κυβερνάω (kybernao) "iduzi, ụgbọala, na-eduzi, na-eme ka a pilot" + Latin mente "uche", ya bụ ịchịkwa akara
Mbụ Jiri Okwu Iyi ọha egwu na Oxford Dictionary Nkọwapụ Iyi ọha egwu Dị ka Gọọmenti site na ụlọ ọrụ
Taa nkọwa nke iyi ọha egwu dị nnọọ iche n'otú e si hụ ya na njedebe 18th. Na mgbe ahụ, na mbụ ọ na-eji okwu iyi ọha egwu na Oxford English Dictionary, a na-akọwa iyi ọha egwu dịka ọchịchị site na njuanya. Ọ bụ ezie na a na - akpọkarị iyi ọha egwu taa dịka òtù dị iche iche, ndị na - abụghị ndị ọchịchị ma ọ bụ ndị gọọmenti etiti, ndị na - agbalị ịhapụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha, na otu karịsịa. N'ikwu na, 200 bụ afọ gara aga, ma ọ dị egwu.
Gịnị mere Oxford Dictionary ji kọwapụta iji iji iyi egwu egwu eme ihe dị ka ọchịchị site na njuanya?
Na Oxford English Dictionary, ụwa, Europe, na karịsịa France, nọ na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị American Colonies adawo megide ndị nna ukwu ha, France zitekwara ya na eze na ebube ya na ememe ya, utu aha ya na nsọpụrụ ya. Ọ bụ France nke nkọwa mbụ nke iyi ọha egwu weere ụdị ya
Ozugbo mbụ na-adọ nke French mgbanwe bụ a n'oge a maara dị ka ndị Ọchịchị ụjọ, ma ọ bụ nanị The ụjọ. Ọ malitere na September 1793 na were a oge nke ọnwa itoolu ruo mgbe mbubreyo July 1794. Na na oge iri puku kwuru iri gi omume ndị na-atụle ga-iro nke mgbanwe e gburu. The ụjọ, na iyi ọha egwu onwe ya bịara mara dị ka a ụdị ọchịchị mmaja, niile ekele na-eme ihe ahụ na-eme na France. Ọ bụ na 1795, a afọ mgbe uka killings ahụ biri, na Oxford English dictionary mbụ ji okwu iyi ọha egwu na-akọwa ọchịchị aka ike ikwu àgwà, na ọ bụ na njikọ ahụ Ọchịchị ụjọ na France.
7 January 2017 na 16: 27
MK Ultra na edinam:
O kwuru na "Echere Mche" site na US Conselligence Agency
Onye na-agbapụ ụgbọelu na-ekweta na ọ 'na-achịkwa' site n'aka ụlọ ọrụ nyocha, ndị na-ahụ anya na-ekwu na ọ dịkarịa ala atọ ndị ọzọ "na-ehi ụra," ndị na-agba égbè, na-agbapụ ụgbè égbè n'ime ìgwè mmadụ
Ndị akaebe: "Ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ atọ nọ ebe ahụ ka na-agbapụ" mgbe e jidere onye mbụ ahụ
8 January 2017 na 21: 18
Gụọ taa na mgbasa ozi pulp (msn.com);
"Amuru dika nwa nwanyi, ugbua nwoke na ime" hu kwa:
"Nke a bụ nwoke dị ime na Great Britain"
Nakwa taa na msn.com: "Akasị nkwekọrịta nkwekọrịta"
Ị ga-ebu ụzọ pịa ozi ahụ: "Ihe nnọchianya nzuzo nke Beyonce"
Ọtụtụ okwu na-eduhie eduhie na ụgha. Ozi ọma na-agbanyeghị. Na n'ezie Davis Icke kwuru na ya 'lizards'.
A na-akpọkwa ọnwa ọdịda ọnwa. Na foto nke akpụkpọ ụkwụ na ọnwa. Ihe dị mma bụ na ha egosila na foto ahụ na Apollo 11 ọnwa ọdịda bụ kpamkpam adịgboroja.
Enweghị mmiri na ọnwa, ya mere akpụkpọ ụkwụ ga-abụ 100% adịgboroja. Ma ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ aghọtaghị na ọ bụ n'ihi na obi ha anaghị arụ ọrụ. Ma ọ bụrụ na mmadụ enwee obi abụọ, m ga-asị, gbalịa ime ihe dị otú ahụ na ájá akọrọ.
Ya mere, e nwere ihe ụfọdụ na-abụghị eziokwu maka ọdịda ọnwa, ma n'ezie, akpụkpọ ụkwụ akpụ zuru ezu iji ghọta na ihe niile dị adị.
9 January 2017 na 00: 27
Kpomkwem adịgboroja ozi ọma bụ na toern na, n'ebe nile, ndị kasị dị ịrịba ama na ọ dịghị mgbe ha gara ọbụna azụ ọma ụlọ ma ọ bụ ihe dị ka na na (adịgboroja) Astronotu onye ozugbo sochiri a autistic ọrịa, ọ dịkarịa ala na ọ dịghị mgbe na-ekwu banyere ya, isi 20e onye nke narị afọ na nke ahụ, mgbe ọtụtụ ihe ndị ọzọ ....
Nke a film (n'okpuru) mgbe ọkara otu awa-akpali nnọọ mmasị, ị na-anụ ya site n'aka onye na-nwere ya arụpụtara ndị engines, ha na-eme ihe niile na uche na flushing-amalite na-eto eto na ndị isi ụlọ akwụkwọ, >> "echiche ọhụrụ"
9 January 2017 na 05: 49
Astronite (English; Astronot) ????
ọ bụ ezie na anaghị m ewepụ na e nwere ihe nzuzo usoro mmefu ego ego nzuzo. (TR-3B, Edgar Fouche)
10 January 2017 na 10: 18
kwa ubochi otutu uzo na msn.com, ao:
"Nwanyị na-eji aka ike agba ndị ahịa"
A ga-enwe vidiyo YouTube dịka isiokwu ahụ si dị.
Ma enweghị m ike ịchọta ya.
Ya mere, m ga-aga NỌTA ugbu a!
Na mega iceberg na Antarctica nke ga-agbaze n'ihi na, i chere ya .... Okpomoku nke ụwa.
Na e nwere icebergs na Antarctica dị ọhụrụ nye m.
Echere m na ọ bụ naanị ice na-efe efe ma na a na-eme iceberg na North Pole.
(Naanị n'etiti onye na-ele anya na-ele ihe anya: Aja polar na-eri penguins?)
N'ihi na ebe a na ugwu ebe ugwu obere oge oyi, o doro anya na a na-akọ akụkọ mgbe niile banyere ihe ndị a na-akpọ ihu igwe na oke okpomọkụ zuru ụwa ọnụ, n'ihi ya, anyị echefughị ​​na ọkụ ahụ na-aga n'ihu.
Onye ọkwọ ụgbọ ala Islamist-onye na-akpọ oku na-akpọ onye ọrụ ya n'ọdịnihu ozi na ọ jụrụ inyefe ndị njem nwanyị.
Nke ahụ ga-enye m ezigbo mmeghachi omume n'okpuru isiokwu.
Ma nke mere na mgbasa ozi pulp jupụtara na ịkọ akụkọ ọzọ taa.
10 January 2017 na 11: 16
naanị na msn.com: "Asteroid nọ na mbara ụwa"
mgbe ahụ, nchịkọta akụkọ kpamkpam ga-agbakwunye vidiyo na ederede:
"Ọ dị ụba ma ghara ịdị ize ndụ maka ụwa: Jupita"
Ozi banyere 'flyby' sitere na Faqt, ya mere isiokwu ahụ ga-abụ eziokwu, anyị ga-ekwu. Ọ bụ ihe nwute na ọ hapụla ụwa mgbe ahụ m na-eche ọzọ. Dị ka prepper SHTF, enwere m, echekwara nri ndị nwere ike, vitamin, mineral na mmiri ruo ọtụtụ ọnwa.
10 January 2017 na 11: 53
Ozi a na msn.com na-adọrọ mmasị maka ndị na-achọ eziokwu;
"Egwu: ihe nkiri a na-ekwu banyere ọnwụ nke onye na-eme ihe nkiri", mgbe anyị pịa ka anyị gụrụ;
"Nkọwa nke 19 mere n'ezie"
Dịka ọmụmaatụ, na peeji nke 7, anyị na-achọpụta na 29 afọ mgbe ọ bụla, onye omeewu bụ Heather O'Rourke nwere ike ịchụ Setan ọkụ.
Ndị na-eche echiche efu ga-eche na ọ bụ ihe mgbagwoju anya. Ọ bụghị m, n'ezie na ejikọtaghị ya na Super Bowl. (lee Zachary Hubbard's gematria na ọtụtụ Setan na àjà na njikọ nke Super Bowl)
O doro anya na ihe ndị dị ka ndị a na-eme ka ọtụtụ ndị kwenye na mmekorita.
10 January 2017 na 14: 23
Telegraaf na-ekwu "Ọ na-eguzo na azụ megide mgbidi" (msn.com)
Na Minista video Minista Lilianne Ploumen nke mmekorita mmekorita na-ekwu na Faloudja kpamkpam bombu na enweghi ulo ogugu.
Umu eletriki na okpu mmiri na-eme kwa oke, ya mere umu mmadu 200.000 alaghachila ... .. iche iche. Enweghị ụlọ fọdụrụ ... Ebee ka 200.000 ga-akpọghachite ndị mmadụ, m na-ajụ onwe m ọzọ.
10 January 2017 na 14: 35
N'ụlọikwuu ụlọikwuu kpuchiri snow, ọ bụrụhaala na ha erughị ebe ugwu nke onye na-ewebata ya.
Karịsịa ịnọgide na-votu na nje ndị a, olileanya hahhahha
10 January 2017 na 14: 54
E gburu ihe karịrị mmadụ 20 na B-52 site na US na ógbè Idlib nke Syria na Jenụwarị 3, dịka onye isi ndị Russia bụ Valery Gerasimov si kwuo.
17 January 2017 na 08: 10
Ụnyaahụ, 16 January onye na-agụ kpakpando Eugene Cernan nwụrụ, NASA kọrọ akụkọ a na saịtị ha ... uhh ... ..15 Jenụwarị ... ..
lee zachary hubbard "Ọnwụ nke Eugene Cernan" na 8 nkeji: 35
30 January 2017 na 12: 31
"India nwere mega-tapeworm".
Onye na-egbu egbu nke nwoke ahụ na-agbanyeghị ihe karịrị 36 kilomita !!
M lere anya ụfọdụ ozi banyere tapeworms na Wikipedia.
Dika ya na 2 na 3 mita, ya mere na 'India na mega-tapeworm' bu ihe omuma nke uwa.
1 February 2017 na 08: 48
"Mkparịta ụka nzuzo na onye uweojii na-agwa ndị uweojii"
Ha na-ebikarị na-amaghị aha ha ma na-eburu ndụ okpukpu abụọ.
John van den Heuvel gbara otu n'ime ndị omempụ ndị omempụ ahụ ajụjụ ọnụ na ebe nzuzo ma kwuo banyere nke a na RTL-Boulevard. lee ozi mgbasa ozi dị adị msn.com.
Ee, ee .... John. Lee ụdị ndụ na-enye obi ụtọ ị nwere.
Ma akụkụ dị mwute bụ na ọtụtụ nde ndị Dutch na-ekpochasị nri a maka biscuits dị ụtọ.
Jụọ onwe gị ndị na-achọ eziokwu:
Kedu ihe mere ị ga - eji mebie mkparịta ụka zoro ezo na onye omempụ mpụ ma ọ bụrụ na ịnwere ike itinye ya na ogbo?
3 February 2017 na 06: 54
"Ndị ọkà mmụta sayensị chọtara dolphin na afo nke plastik" (ANP / msn.com)
Nke ahụ bụ dolphin nzuzu.
Ugbo na-eri oge plastic n'ihi na ha dị ka jellyfish (ya mere John van den Heuvel kwesịrị ịkpachara anya mgbe ọ na-aga igwu mmiri na oké osimiri).
Mmiri mmiri na-enwetakwa plastic nke na-eme ka ha nwụọ.
Ihe niile dị mma, ma iri mpe akwa plasta yiri ka m bụ ozi adịgboroja si n'elu.
A dolphin dị nnọọ ọgụgụ isi na-eri plastic akpa !!
Ọ ga-abụ na ANP akụkọ banyere dolphin si Cuvier.
Aha Latin: Ziphius Cavirostis. Aha akwukwo sayensi sitere na ihe omumu ihe omimi, bu Zihi. (Wikipedia)
Ntak emi ẹsịnde ndudue emi? Eleghị anya n'ihi na anyị na-dị ka ụmụ mmadụ nwere ihe mmekọrita ya na Azụ dolphin karịa na nnụnụ na schildpadden.En atụmatụ yiri na anyị chọrọ iji kwụọ ụgwọ a ọtụtụ nke gburugburu ebe obibi tax maka plastic, kama organic ere ure 'plastic' mmeghe, nke ka e kee maka afọ, ma o yiri ihe na-apụghị maka gburugburu ebe obibi ma ghara itinye aka na nkata nke ndị òtù psychopathic ndị chọrọ ibibi ihe niile.
ClairVoyance dere, sị:
12 August 2017 na 08: 07
Achọpụtara m na ọtụtụ ihe nkiri maka nchịkọta ihe nkiri youtube anaghị arụ ọrụ ọzọ.
Ya mere enweghi m ike iwepu ume site n'itinye vidiyo vidio YouTube nke na-aga izu ole na ole ka e mechara.
Achọrọ m ka m biputere-ma ugbu a onye na-agụ ajụjụ jụrụ naanị google n'onwe ya:
"Ọ bụ Iwu: Nke a sitere na 1984 Orwell" (Truthstream Media)
" Anis Amri attacker Berlin Christmas ahịa gburu Milan (Mmelite)
Age nke Aquarius, New Age na New World Order »
Nleta nile: 13.867.565